फागुन २६, २०७४ बिगुल
कसरी पर्छ इन्द्रेणी ?
इन्द्रेणी वा इन्द्रधनुष प्रकाश र रंगबाट उत्पन्न भएको यस्तो घटना हो जसमा रंगीन प्रकाशको एउटा अर्धवृत आकाशमा देखिन्छ। जब सूर्यको प्रकाश पृथ्वीको वायुमण्डलमा भएको पानीको थोपा माथि पर्छ, पानीको थोपाले प्रकाशलाई परावर्तन, आवर्तन र डिस्पर्सन गर्दछ। फलस्वरुप आकाशमा एउटा सप्तरङ्गी अर्धवृताकार प्रकाशीय आकृति उत्पन्न हुन्छ। यो आकृतिलाई नै इन्द्रेणी भनिन्छ।
घामपानी परेपछि गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिका १ हुँगाबाट देखिएको सुन्दर इन्द्रेणी । तस्बिर/शिला पालुङ्गे मगर
इन्द्रेणी देखिनुको कारण वायुमण्डलमा पानीका कणहरु हुनु नै हो। वर्षा, झरना बाट उछिट्टिएको पानी, शीत, कुहिरो आदिको इन्द्रेणी देखिने प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। इन्द्रेणीमा सात रंगहरु रातो, सुन्तला, पहेंलो, हरियो, आकाशे निलो, गाढा निलो र बैजनी रंग क्रमैसँग देखिन्छ।
प्रकाशित : शनिबार, फागुन २६, २०७४१६:४७
कथा: फेसबुकमा भेटिएकी मंगल ग्रहकी सुन्दरी
‘ट्याक्स हेवन’ को नेपाल नाता ! विदेशी लगानी भन्दै कसले कति भित्र्याए ?
कमिशन मागेर दिक्क बनाएपछि सिएमसी भाग्यो ! प्रतिशत नै तोक्ने यी भ्रष्ट “ब्यूरोक्राट्स” !
देश टुक्र्याउँन खोज्नेलाई धेरै देशमा मृत्युदण्डको हुन्छ ! नेपालमा चाहिँ… ?
५८ मिनेट अगाडि बिगुल